Andrasana ny valin’ny fitilian’ny IPM: vehivavy iray ahina ho matin’ny coronavirus tetsy Befelatanana | NewsMada
Par Taratra sur 08/05/2020
Nitranga ny tsy nampoizina. Nanaitra ny maro ny vaovao momba ny coronavirus, omaly, na ny antontanisa na ny momba ny olona tratry ny valanaretina. Anisan’izany ilay vehivavy, Raheliseheno Samueline, nodimandry tetsy Befelatanana, afakomaly.
Efa mipetraka ny ahiahy, saingy mbola andrasana ny ho tohiny… Nambaran’ny mpandrindra ankapobeny ny eo anivon’ny CCO, ny Jly Andriankaja Elack Olivier, omaly fa anisan’ireo mpandeha 11 tamin’ny fiara « Cotisse », ny 8 avrily lasa teo, ary ahina ho nitondra ny tsimokaretina coronavirus io vehivavy io. Anisan’ireo mpandeha miisa 11 notadiavina sy nanaovana antso avo koa izy ary efa nanaovana fitiliana. Voamarina anefa fa tsy mitondra ny tsimokaretina ny tenany, araka ny nambaran’ny eo anivon’ny CCO eny Ivato.
Nanana olana teo amin’ny taovam-pisefoana
Nisy enina tamin’ireo mpandeha 11 voalaza etsy ambony kosa anefa no tratran’ny coronavirus ka tsy fantatra na anisan’io izy na tsia fa notazonina notsaboina tetsy Befelatanana. Nanao ny dingana rehetra ny tompon’andraikitra manoloana izao fahafatesany izao. « Efa natao ny « prélèvement » sy ny fitiliana eny amin’ny Institut Pasteur ka ho fantatra eo ny ho tohiny… Nanana olana eo amin’ny taovam-pisefoana io ramatoa io », hoy ihany izy. Loharanom-baovao hafa no milaza fa efa manana aretina mitaiza izy. Nanteriny fa vao mainka manamafy ny fampitandrenana amin’ny fiarovana ny tena izany na inona valin’izany fitiliana izany.
Hanao fanambarana anaty mangarahara
Manoloana izany, tokony hanaraka ny fepetra sy ny lamina ary ny toromarika avokoa ny rehetra manoloana izao tranga izao. Tombanana fa mbola hanao fanambarana sy haneho ny mangarahara momba ity raharaha ity ireo tompon’andraikitra isan-tokony raha vao mivaly izany fitiliana izany.